पूर्वराष्ट्रपतिले डा. केसीलाई भने– बरु सत्याग्रह नछोड्नुस्, अनशन तोड्नुस् – Health Post Nepal
२०७५ माघ १८ गते १५:५६
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई परिस्थिति ज्यादै प्रतिकूल बनेको भन्दै अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार अपराह्न ३ बजे डा. कसीलाई भेट्न अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका पूर्वराष्ट्रपति यादवले एउटा सत्याग्रहीको अनशनको २४ दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले वार्ता र जीवनरक्षाको कुनै पहल नगरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल वार्ता गरी डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे ।
लोकतन्त्रमा सामान्य नागरिकको पनि जीवनरक्षा गर्नु सरकारको अहम् दायित्व बन्ने भन्दै डा. यादवले डा. केसीको सत्याग्रहप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । डा. केसीले उठाएका मुद्दाहरू सान्दर्भिक र संवेदनशील रहेको भन्दै डा. यादवले चिकित्साशिक्षा तथा स्वास्थ्यक्षेत्रको सुधारमा समर्पित सत्याग्रहीका मागको सम्बोधन हुनुपर्ने संकेत गरे ।
पछिल्लो परिस्थिति ज्यादै संवेदनहीन र प्रतिकूल बन्दै गएको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले यो विषम परिस्थितिमा सर्वसाधारण नागरिकको सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अनवरत लड्ने अमूल्य जीवन नफाल्न डा. केसीलाई आग्रह गरे । तत्कालका लागि अनशन तोडेर जीवन बचाउँदै फरक ढंगले सत्याग्रहलाई अघि बढाउन डा. केसीलाई पूर्वराष्ट्रपतिको सुझाब थियो ।
सत्तापक्षले बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट समेत बहुमतको बलमा पेलेरै डा. केसीको मागविपरीत चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरेसँगै राजनीतिक तथा नागरिक तहबाट डा. केसीलाई अनशन तोड्न सुझाउने क्रम जारी छ । बिहीबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अनशनस्थलमै पुगी डा. केसीलाई अनशन छोडेर चिकित्साशिक्षा सुधारको अभियानमा सँगै लड्न आग्रह गरेका थिए । आजै (शुक्रबार) केही समयपछि डा. केसीलाई विभिन्न नागरिक अगुवा, शुभचिन्तक तथा विविध क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले भेट्दै छन् ।